Maxay doorashada Maraykanku muhiim ugu tahay dunida? – Bandhiga
Maxay doorashada Maraykanku muhiim ugu tahay dunida?
Maraykanku waa dalka ugu wayn ee dunida la leh xiriir ganacsi kolka laga hadlayo waxa uu dhoofiyo ama loo dhoofiyo ( Import and export). 200 oo dal ayey iswaydaarsadaan ganacsi ku kaca 5.6 trillion oo doollar.
Waxa uu caalamka ku leeyahey 600 oo saldhig, kan ugu waynna ku yaal Jarmalka oo waxaa deggan 9,000 oo ciidaan ah.
Waa deeqbixiyaha ugu wayn oo ku dara miisaaniyadda Qaramada midoobay dhaqaale ka badan 14 billion sannadkii. Dhaqaalahaas oo loo adeegsado nabad ilaalin, ka hortagga faafidda cudurrada, Bangiga adduunka, bini’aadamnimada iyo hay’adaha gargaarka.
Waa cududda kowaad ee dhaqaalaha iyo militari ee caalamka.
Kolka si kale haddaan u dhigno ruuxa caawa loo doorto Madaxweynaha Maraykan, waa Madaxweynah caalamka! Toos ma ahan ee waa si dadban, meelaha qaarkoodna waaba toos.
Waa Imbiraadooriyad gaamurtay oo khasabtay in dal walbaa natiijada doorashadiisa isha ku hayo, dalalka qaarkoodna labada hoggaamiye ee tartamaysa midba u soo duceeyo kan ay isleeyihiin dan baa ugu jirta dalkaaga.